:: My Little World ::: 2009
Posted by Nay Nay Naing at 12/22/2009 11:14:00 PM6comments
Burmese fried noodle
ဘယ်ရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ဗိုက်ဆာနေတယ်။ ရန်ကုန်က ခေါက်ဆွဲကြော် စားချင်စိတ် ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တင်လိုက်တယ်။ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲက ပုံတွေပါ။ ပုံထဲက ခေါက်ဆွဲကြော်က သံတော်ဆင့် ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်က ၀ယ်လာတာပါ။ အဲဒီနေ့ က ညနေပိုင်း အပြင်လည်း မထွက်ချင်၊ ထမင်းလည်း မစားချင်ဘူးဆိုလို့အမေက မောင်လေးကို သွားဝယ် ခိုင်းခဲ့တာ။ စားလို့ ကောင်းတယ်။ ကြက်သားနဲ့လား ၀က်သားနဲ့ လား မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကြက်သားဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ဆုိုင်မှာ ၀ယ်စားတဲ့ ၀က်သားနဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်တွေက အဆီတွေပါတော့ မစားဖြစ်ဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 12/20/2009 05:18:00 PM3comments
♥ In Love with....
It'saPresent From My Love!!
Labels: Diary, InLoveWith
Posted by Nay Nay Naing at 12/17/2009 08:45:00 AM7comments
အတွေးများနဲ့ ရူး... ရူး..
တခါတလေ ခေါင်းထဲမှာ ဖျက်ကနဲ ပေါ်လာတတ်တဲ့ သီချင်း စားသားတချို့ ။ ငယ်ငယ်က အဲဒီသီချင်းက ကိုယ်နဲ့အရမ်း မရင်းနှီးခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် စာသားတချို့ ကို စိတ်ထဲမှာ မှတ်မိနေတယ်။ သီချင်းနာမည်လည်း သိတယ်။ သီဆိုသူကို မှတ်မိတယ်။
သီချင်းနာမည်က ♪ အတ္တ ♪ သီဆိုသူက ♪ မေဆွိ။
ငယ်စဉ်ကတည်းက ရိုးသားဖြူစင်ခဲ့.. ရေလိုကြည်လင်အေးမြလို့သာယာနေတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို
ဘယ်သူဝင်ကာ ဆေးဆိုးလိုက်ပြီလဲ.. အိုး..... စဉ်းစားမရတော့ဘူး ကိုယ့်စိတ်တွေ
လေထဲမှာလွင့်မျောကာ ထိန်းမရနိုင်ဘူး. ကိုယ့်မျက်လုံးတွေထဲ..
အမြင်တွေ မှုန်ရီဝါး မသဲကွဲတော့ဘူး…
ဆန္ဒများနဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုဖိစီး .. ခန္ဒာကိုယ်က သွေးဆဲလ်နဲ့ … တည်ငြိမ်နေတဲ့ နှလုံသားထဲ
ဘယ်သူဝင်ကာ အဆိပ်ခတ်လိုက်ပြီလဲ… အိုး… အိပ်လို့ မရတော့ဘူး.. ကိုယ့်ညတွေ…
ရင်မောကာ နေရတာ စိတ္တဇလိုပဲ… ကူညီကြပါအုံး…
ဒီမှာကယောင်ချောက်ခြား အတွေးများနဲ့ ရူး... ရူး..
ဦးဏှောက်ထဲမှာ လိုချင်တာပဲသိ… ဘယ်အရာတွေ ဘယ်လို…
အို ကောင်းသလား ဆိုးမှာလား.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ခွဲခြားမသိတော့ဘူး.
အတ္တများနဲ့အဆိပ်တက်လို့အခန်းကျဉ်းထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရူး.
ပြန်နားထောင်ချင်လို့အင်တာနက်ပေါ်မှာ လိုက်ရှာနေတာ ကြာခဲ့ပြီ။ ချောစုခင် (အတ္တ) ဆိုထားတာကိုတော့ တွေ့ တယ်။ နားထောင်ကြည့်တယ် ခံစားလို့ မရဘူး။ မေဆွိ ဆိုတဲ့ အသံက နားထဲ စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတယ်။ မေဆွိဆိုတာကိုပဲ နားထောင်ချင်တယ်။ လိုက်ရှာနေတာ အခုအချိန်ထိ လုံးဝ မတွေ့ ဘူး။ ဦးစမ်းအောင် ဆိုတဲ့သူ ရဲ့ Youtube မှာ TV ကလာတဲ့ သီချင်းအဟောင်းတွေ တင်ထားတာ စတွေ့ တဲ့အချိန်ကလည်း ဒီသီချင်းများ ရှိမလားဆို ရှာကြည့်မိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီသီချင်း ရှိမနေဘူး။
MTV လေး ပြန်ကြည့်ချင်တယ်။ ဒီသီချင်း TV မှာ လာလို့သာ သိနေခဲ့တာ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ မှတ်မိ နေသလောက်ဆို သစ်ရွက်ကြွေရှုခင်း နောက်ခံနဲ့ ။ အိမ်တစ်လုံး နောက်ခံလည်း ပါတယ်။ နောက်ခံတွေက သီခြား ပန်းချီကား၊ ဓာတ်ပုံလို ဟာတွေလို့ထင်တယ်။ ဒီတော့ မေဆွိက ထိုင်ခုံ ပုလေးမှာ ထိုင်လိုက်၊ မတ်တပ်ရပ်လိုက် နီးလာလိုက် ဝေးသွားလိုက် ပုံစံ အမျိုးမျိုးပဲ။
အတ္တဆိုတဲ့ အရာနဲ့သာမန်လူသားတိုင်းက ကင်းနိုင်ကြမယ် မထင်ဘူး။ အတ္တစိတ်လေး အလွန်အကျွံ မများအောင်တော့ အသိတရားလေး နဲ့ထိမ်းချုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/16/2009 10:29:00 AM9comments
ဝေးဝေးလည်း မနေနိုင်ပါဘူး။ မသုံးပဲလည်း မနေနိုင်ဘူး။
တကယ်တကယ်ဆို ကိုယ့်အတွက် ရတာတွေက ဒီ့ထက်မကပါ။
ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိတာတွေ အများအပြားရနိုင်သလို အပေါ်က ပုံထဲကလို မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲ ရောက်လာနိုင် ပါတယ်။ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ဂရုစိုက်ရပါတယ်။
အမြဲ သတိ ပေးတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ လွယ်လွယ်ရတယ်ဆိုပြီး ဒေါင်းလုတ်တွေ အလွယ်တကူ မလုပ်နဲ့့တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့။ မလိုတာတွေကို ဒေါင်းလုပ် မလုပ် မိအောင်နေပါတယ်။ စိတ်မချရတဲ့ အီးမေးတွေကို လုံးဝ မဖွင့်ပါဘူး။ exe ဖိုင်ဆို တော်ယုံနဲ့ဒေါင်းလုပ် မလုပ်ပါဘူး။ စိတ်မချရတဲ့ Website တွေကို မသွားပါဘူး။ Security Update လည်း အမြဲလုပ်ပါတယ်။ AntiVirus Software ကိုလည်း အမြဲ update လုပ်ဖို့ မမေ့ ရပါဘူး။
ကိုယ့်အိမ်က အင်တာနက်ကိုလည်း လုံခြုံရေး ဂရုစိုက်ပါတယ်။ Password တွေကိ်ုလည်း ရှည်ရှည်လျားလျား ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ထား ပါတယ်။ တခါတလေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် မမှတ်မိရလောက်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ တခြားသူတွေကို ကိုယ့် Password ပေးသိတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး။ Messenger တွေ ၊ အီးမေးတွေက နေ လင့်တွေ ဖိုင်တွေ ရတယ်ဆိုလည်း ပို့ တဲ့သူကို တကယ်ပို့ တာလား ဆိုတာ သေချာအောင် confirm လုပ်ပြီးမှာ လိုအပ်တာတွေ ဆက်လုပ်ပါတယ်။ Thumbdrives တွေသုံးရင်လည်း အဲဒီထဲက ဖိုင်တွေမကူးခင် Scan လုပ်တဲ့အကျင့်လေး အမြဲလုပ်ရပါမယ်။ ကွန်ပြူတာမှာ folders တွေ မလိုအပ်ရင် share မလုပ်ပါဘူး။ လုပ်ဖို့ လိုမယ်ဆိုရင်လည်း Password လေး ထည့်ထားပါတယ်။
ကျန်သေးလား။ ကျန်နိုင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဒီလောက်ပဲ စဉ်းစားရပါတယ်။ သတိရတာရှိမှ ထပ်ဖြည့်ပါမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/15/2009 05:17:00 PM4comments
အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာ အပြင် မထွက်ဖြစ်ဘူး။ အိမ်မှာ လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ လုပ်ပြီးလို့ဂိမ်းလည်း မဆော့ချင်၊ ရုပ်ရှင်လည်း မကြည့်ချင်တဲ့ အချိန်တွေမှာ....
အခု အပတ် မဟုတ်ဘူး။ နိုဝင်ဘာ ပထမ အပတ်ကပါ။ အိမ်မှာနေရင်း ပျင်းလာတာနဲ့Window 2003 Server သွင်းထားတဲ့ ကွန်ပြူတာကို Window7Enterprise Edition ပြောင်းသွင်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ OS အသစ် ဆိုတော့ စမ်းကြည့်ချင်တာလည်း ပါတယ်။ အခုလို OS အသစ်အသစ်တွေ ထွက်တိုင်း လိုသလို စမ်းနိုင်ဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကလည်း အမြဲ တွန်းအားပေး လိုအပ်တဲ့ Software တွေ အကုန် စီစဉ်ပေးတယ်။ ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ပေါ့လေ။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာ ရှိမယ်ဆုိုရင်တော့ သူကူပါတယ်။
ဒီကွန်ပြူတာကို ဒီရောက်ခါစ အချိန်က ၀ယ်တာဆိုတော့ အတော်လေး ကြာနေပြီ။ စသုံးတုန်းက Window XP သွင်းထားတယ်။ Window Vista ထွက်ခါစက တစ်ခါ ပြောင်းပြီး သုံးကြည့်သေးတယ်။ သိပ်မကြိုက်တာ နဲ့တခြား OS တွေပြောင်းသုံးတယ်။ နောက်ဆုံးကတော့ Window 2003 Sever Standard Edition သုံးနေခဲ့တာ။ အခု Window7သွင်းတယ် ကျန်တာ အကုန် အဆင်ပြေ တယ်။ ပြသနာလို့ ပြောနိုင်တာဆိုလို့Network Cards တွေကို ချက်ချင်း တန်း မသိဘူး။ အဲဒီ ကွန်ပြူတာမှာ Network ကတ် သုံး ခုတတ်ထားတယ်။ တစ်ခုမှ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် USB Wireless Adapter တစ်ခုရှိနေတာနဲ့သုံးကြည့်တော့ အဆင်ပြေပြီး အင်တာနက်ရသွားတယ်။ အင်တာနက်ရတော့ Windows Auto Update လုပ်လိုက်တဲ့ အခါ စက်မှာ တတ်ထားတဲ့ ကတ်တွေကို အလိုလို သိသွားတယ်။ Graphic Card လည်း သူ့ အလိုလို သိတယ်။ မဆိုးပါဘူး။ Window Activate မလုပ်သေးပဲ ဒီတိုင်း စမ်းသုံးကြည့်တယ်။ သွင်းချင်တာတွေ သွင်းကြည့် ကလိဖြစ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီ အပတ် စနေ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်လုံး အချိန်ကုန် သွားတာပါပဲ။
4-5 ရက်လောက် စမ်းကြည့်ပြီး ဆက်သုံးမယ် စိတ်ကူးတာနဲ့OS တစ်ခါပြန် တင်ပြီး Window Activate လုပ်လိုက်တယ်။ တကယ်မသုံးပဲ Key ကုို မဖြုန်း လိုက်ချင်ဘူး။ အခုအချိန်အထိတော့ အဲဒီ ကွန်ပြူတာမှာ Window7ဆက်သွင်းထားတုန်းပဲ။
ဒါက OS အသစ် Install လုပ်နေတဲ့ တခဏ အချိန်မှာ...
Window Vista in My Computer
ဒီတစ်ပတ် နောက် တမျိုး။ ... နောက်များမှ ရေးပါအုံးမယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 12/13/2009 10:48:00 PM4comments
X'mas at PS
အလင်း နဲ့အမှောင်
Another Room with 2008 X'mas Items
Posted by Nay Nay Naing at 12/07/2009 01:55:00 PM 10 comments
The educated fool..
The educated foo
Posted by Nay Nay Naing at 12/07/2009 01:58:00 AM2comments
Horoscope 2010 (စံ-ဇာဏီဘို)
စံ-ဇာဏီဘို ၂၀၁၀ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း (shweo.com)
ကိုယ်တိုင်တော့ တခါမှ အဲ့ဒီလို စာအုပ်လေးတွေ ၀ယ်မဖတ်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် တခြားသူငယ်ချင်းတွေ ၀ယ်တာ၊ သူတို့ အိမ်တွေကနေ အဲလို့ စာအုပ်လေးတွေ ပို့ ပေးတာ မြင်ဖူးနေတယ်။ အခု ရွှေအိုး မှာ တင်ထားတာတွေ့ လို့စိတ်ဝင်စားသူတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်ဖို့သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit to Mary Khoo
Posted by Nay Nay Naing at 12/06/2009 01:45:00 PM4comments
To Help You Feel Better....
Posted by Nay Nay Naing at 12/04/2009 01:04:00 AM3comments
There is no time more appropriate to say....
4th Thursday Of NOV 2009
P.S. I am so glad I was born.
Posted by Nay Nay Naing at 11/26/2009 08:58:00 PM5comments
မြင်ကွင်းလေး သဘောကျသွားတာကြောင့် ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ယုံ အားမရလို့camera ထုတ်ပြီး ရိုက်ယူဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရမ်း သဘောကျတယ်။
ပုံအကြီး ကြည့်ချင်တယ်ဆို ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/21/2009 01:13:00 AM9comments
မစားဖူးလို့စားကြည့်ဖို့ဝယ်လာဖြစ်တဲ့ အသီး။
From Cape Gooseberry
စားကောင်းလားဆို အသီးရဲ့ အရသာထက် အနံ့ ကို ပိုကြိုက်တယ်။ အပင်တွေ အသီးတွေ အပွင့်တွေက ထွက်တဲ့ စိမ်းဖန့် ဖန့်မွှေးတေးတေး အနံ့ တွေနဲ့ဝေးနေတာကြာလို့ လားမသိဘူး အခု အသီးက ထွက်တဲ့ အနံ့ လေးရနေတာကို သဘောတွေ ကျနေမ်ိတယ်။ အသီးရဲ့ အရသာက မချိုဘူး။ ချဉ်ပြုံး ချဉ်ပြုံးလေ။
မနေ့ က မိုးတွေရွာတယ်။ နေ့ လယ်စာစားအပြီး မိုးရွာနေတာကြောင့် အလုပ်ပြန်ဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့် အချိန်းဖြုန်းတဲ့ အနေနဲ့သစ်သီးရောင်းတဲ့ ဆိုင်ထဲ ၀င်ကြည်ရင်း ထူးဆန်းလို့ဝယ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ ဆိုင်မှာ အဲဒီအသီးကို Goosebarries လို့label တတ်ထားတာ ကိုယ်အရင်သိတဲ့ Goosebarries တွေနဲ့ လည်း မတူဘူးလေ။ ထည့်ထားတဲ့ ပုံစံလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။
အသီးက အခွံနဲ့ မို့ထူးဆန်းနေတာ အခွံချွတ်ထားပုံစံက သိပ်မထူးဆန်းဘူး။ အရောင်သာကွဲတာ ပုံစံက ချယ်ရီသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး သေးသေးလေးတွေနဲ့ တူတယ်။
Google ကြည့်တော့ အဲဒီအသီးနာမည်က Cape Gooseberry (Goldenberry) လို့ခေါ်ကြောင်း သိလိုက်ရတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးပင်နဲ့မျိုးနွယ်တူပြီး သူ့အပင်ပုံစံ နဲ့ပန်းပွင့်ပုံစံက ခရမ်းချဉ်သီးလိုပဲ။ သူရဲ့ အရသာက ချဉ်တယ်၊ Gooseberry နဲ့Cherry ကြားမှာရှိတဲ့ အရသာမျိုးလို့ဆိုထားတယ်။ ဒီတိုင်းလည်း စားလေ့ရှိသလို၊ ဆလတ် ထဲ ထည့်စားတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ ယိုထိုး စားတယ်။ ဂျယ်လီ လုပ်စားတယ်။ နောက်ပြီး ကိတ်မုန့် တွေပေါ်မှာ အလှဆင်တာမျိုးလည်း သုံးတယ်တဲ့။ ဒီအသီးကို စားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ ချောကလက် အရည်မှာ နှစ်ပြီး စားတာလို့သိရတယ်။
၀ယ်လာတာ အကုန်မစားရသေးဘူး။ ကျန်သေးတယ်။ နောက်နေ့ မှ ချောကလက် သွားဝယ်ပြီး အရည်ပျော်အောင်လုပ်ပြီးရင် အသီးနဲ့အတူ စားကြည့်အုံးမယ် စိတ်ကူးထားတယ်။
Cheese Cake ကို Goosebarries အလှဆင်ထားတဲ့ပုံ။
အပေါ်က Cake ပုံနဲ့အောက်ကပုံက အင်တာနက်ပေါ်မှာ အသီးအကြောင်းလိုက်ရှာရင်း တွေ့ တဲ့ပုံတွေထဲက ကြိုက်လို့ ယူထားတာပါ။
အိမ်က အစ်မကို မေးကြည့်တော့ အဲဒီ အသီးကို ဘောက်သီး လို ခေါ်တယ်။ သူတို့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းဈေးတွေမှာ ရောင်းလို့အမြဲဝယ်စားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဈေးပေါတယ်တဲ့။ ပြောလို့ သာသိရတာ ကိုယ်တို့ ကျောင်းမှာတော့ အဲဒီအသီး မရောင်းဘူး၊ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို စားဖို့ မပြောနဲ့မြင်တောင် မမြင်ဖူးဘူး။
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဈေးမပေါဘူး။ ဒါပေမယ့် ချယ်ရီသီး လောက်တော့ ဈေးမကြီးဘူး။ မနေ့ က ၀ယ်လာတာ S$3.90 ပေးရတယ်။
Click here to know more about Cape Gooseberry
Posted by Nay Nay Naing at 11/20/2009 11:29:00 AM 10 comments
Posted by Nay Nay Naing at 11/18/2009 10:50:00 PM 8 comments
Facebook: Magic Circles (Konami Code)
Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က Facebook Trick ဆိုပြီး သတင်းပေးထားတာနဲ့စမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ စက်ဝိုင်းလေးတွေ ပေါ်လာတာ လှတယ်။
Press up,up, down, down, left, right, left, right, B, A, Enter key,
then press up and down and magic circles will appear.
The only way to get rid of them are to log off or refresh the page.
ဟိုတစ်ခါလည်း အဲလိုကုတ်နဲ့ ပဲ Easter Egg လေးတွေ ပေါ်လာသေးတယ်။ ဒီနေ့ တော့ Code ကို ဘယ်လို ဘယ်သူ စတင်ဖန်တီးတာလဲ၊ ဘာကြောင့် အဲ့လို ဖြစ်တာလဲ သိချင်စိတ်နဲ့Google ကြည့်လိုက်တော့ ...
အဲဒီ Code ကို Konami Code (Konami Command) လို့ခေါ်ပြီး Konami ဗီဒီယိုဂိမ်း တွေအများစုမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ Cheat Code တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ အဲဒီကုတ်ကို ၁၉၈၀ ကျော်က Nintendo အတွက်ထုတ်တဲ့ Gradius မှာ ပထမဆုံးသုံးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းတခြား ဂိမ်းတွေမှာ ပါသုံးတယ်ပေါ့။ Most Famous Cheat Code တဲ့။ ဘာလို့ ဟိုး အရင် ဂိမ်းဆော့တုန်းက ဒီလို Cheat Code တွေ မသိတာလဲ မသိဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းက အခုထက် ပိုရိုးသားခဲ့တာပဲ။
ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ လိုက်ဖတ်ရင်း အဲဒီ Konami Code က Facebook တစ်ခုထဲမှာ မဟုတ်ပဲ တခြား ဆိုဒ်တချို့ မှာပါ အလုပ်လုပ်ကြောင်း သိရတယ်။
Konami Code (Konami Command)
PHP.net ဆိုဒ်မှာ Logo ပြောင်းသွားတယ်။
Qiwi.be မှာ Enter တစ်ချက်နှိပ်တိုင်း ငမန်းတစ်ကောင် ပေါ်လာတယ်။
BBC Glow မှာ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ (K-9)ပုံ ပေါ်လာတယ်။
University of Massachusetts Transit Services မှာ စမ်းကြည့်တော့ Rick Astley video Page ကို ရောက်သွားတာတွေ့ ရတယ်။
Google Reader မှာဆို နောက်ခံ ပြောင်းသွားတယ်။
တခြား ဘယ်ဆိုဒ်တွေရလဲနဲ့ဘာတွေ ဖြစ်သလဲသိချင်တယ်ဆို ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ Website မှာ အဲဒီလို Code လေး ထည့်ရေးထားချင်တယ် ဆို ရေးချင်တယ်ဆို ရေးလို့ လည်းရတယ်။ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်တော့ မစမ်းကြည့်ရ သေးဘူး။ စမ်းဖြစ်မယ်လဲ မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အတွက်...
The Konami Code - How To Implement it On Your Site @ abhinavsingh.com
Konami Code: Tweetable Konami code @ unwrongest.com
Credit to YeMinHtut
Posted by Nay Nay Naing at 11/17/2009 03:39:00 PM3comments
ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ ကြုံတွေခဲ့ရ၊ ချစ်ခင်ကြင်နာမှု့ များပေးခဲ့ကြတဲ့
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများ အားလုံး ...
အကြင်နာတရား၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိသူ လူသားများ အားလုံး အတွက်။
လူသားတိုင်းဟာ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သူ့ ရဲ့ မိသားစု ၀င်တွေ၊ ချစ်ခင်သူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ ကြုံ ဆက်ဆံပတ်သက်နေတဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ ကြင်နာတဲ့စိတ်ကိုပြတဲ့ အပြုအမူမျိုး အကြိမ်များစွာ လုပ်ဖူးကြမှာပဲလို့ယုံကြည်မိတယ်။ ဒီတော့ လူသားတိုင်း ဒီနေ့ (13th Nov 2009) မှာ ဒေစီပန်း တစ်ပွင့် ရ သင့်တယ်။
Singapore Kindness Movement - www.kindness.sg
ဒီနေ့နေရာအတော် များများ အ၀ါရောင် ဒေစီပန်းလေးတွေ ဝေပေးနေတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကို ကြင်နာစွာကူညီခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပန်းလေးတွေ ပေးလို့ရဖို့ ပါ။ အပြင်မှာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့ဒေစီ ပန်းပွင့်လေးတွေ ပေးဖို ခက်ခဲမယ်ဆို ဒီနေရာကို သွားပြီး အီးမေးက တစ်ဆင့် ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတပါးအပေါ် ကြင်နာစိတ်ထားပါ၊
ကိုယ့်ကို ကြင်နာမှု့ ပေးသူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/13/2009 10:42:00 AM4comments